Izifundo ze-Yoga zempumelelo empilweni
Ngisho noma ungayisebenzisi i-yoga, njengempilo, usebenzise ngokunenzuzo lokho lo mkhuba okunikeza ukuzithuthukisa nokukhuthazwa ezindaweni ezihlukahlukene zokuphila kwakho. Siqoqe izifundo ezinhle kakhulu ze-yoga ezizosiza noma ubani ukuba afeze impumelelo yempilo. Isifundo 1. Ukunqoba ngaphandle kobudlova!
I-Yoga yamukela ukuguquguquka kwemvelo. Ukugxila ngokungapheli, ukuphefumula ngaphandle kokucindezeleka - konke lokhu kukuvumela ukuba ufinyelele umgomo ngomzamo omncane futhi wenze ama-asanas, okubheka kuqala, okungaqondakali emzimbeni wakho. Into esemqoka akuyona ukuphoqelela ukuba unqobe ngokuqinile umkhawulo wamathuba akho, kodwa ukuthuthukisa ukuguquguquka okungokomoya. Ikhono lokuzilibazisa nokuzivumelanisa nokushintsha linye yezinkinobho zokuphumelela kanye nomsebenzi. Ngokusho kocwaningo olwenziwa yi-Institute of Copperburn, izinga elilodwa lomholi wangempela liguquguqukayo, ikhono lokubhekana nezinguquko ezingalindelekile, zivumelane nesimo.
Okubalulekile: sebenzisa indlela eguquguqukayo. Ngokushintshwa kwezimo ngokuzumayo, phumula, "khulula" Uhlelo A bese udweba up Plan B, ngaphandle kokubuka emuva emihlanganweni nemithetho.
Isifundo 2. Phuma ekupheleleni
Ukwenza i-complex complex akuyona umgomo, ngokwemithetho ye-yoga. Into esemqoka yindlela yokuthuthukisa, hhayi ukuzama ukuphikisana ukuphelela. Ukungapheleli akugcini nje ekuvimbela ukuthi ungaqhubeki phambili, kodwa futhi kutholakala emakhono akho eqiniso, kwenza kube nokwesaba ukwehluleka, okuvimbela ubuciko bakho kanye nekhono lokucabanga ngokungavumelani. Abantu abaningi bayaziphoqa ukuba benze konke ngokugcwele nangendlela efanele. Ukwesaba ukuthi le mithetho isungulwe thina ngabanye. I-Yoga nayo isiza ukugxila endleleni yakho, hhayi ukubuka emuva uma umuntu ecabanga ukuthi kulungile. Ukukhululwa ekupheleleni, ekugcineni, kungasiza ukwenza umsebenzi wakho ube nenjongo futhi ufanele izifiso zakho zangempela nezifiso zakho.
Okubalulekile: indlela elahlekelwayo ngokuqhathanisa nabanye noma ukuzama umgomo othile omuhle. Isinyathelo ngasinye esisha sihlolwe uma siqhathaniswa nomuntu siqu, nanyana omncane, impumelelo endleleni eya emgomweni. Lokhu kuyisisusa esihle nokusekela okuqhubekela phambili.
Isifundo 3. Gxila!
Noma ubani owake wazama ukwenza "i-Eagle ye-Eagle" noma enye i-pele, ngokusekelwe kokulingana, angasho ukuthi uma ungakwazi ukugxila, uzozamazama noma wehle. Ukugxila kulokho okwenzayo, kukuvumela ukuba ususe imicabango engaphandle futhi unciphise izinga lokukhathazeka, ngakho-ke, ukuze uzuze imiphumela engcono kakhulu "lapha nakwamanje." Futhi lokhu akusebenzi nje kuphela kumkhuba we-yoga. Manje sekuyisikhathi sokuba "inhloso enzima", isb. "ukugxila kokuqaphela" ekusebenzeni komsebenzi othize. Ungazami ukuhlanganisa impilo nemisebenzi yomuntu siqu. Uma ungafuni ukuhlala endaweni "engcolile" yezibopho ezingagcwaliseki, ungavaleli isikhathi esabelwe ukusebenza ngezinkinga zakho. Lapho usuku lokusebenza seluphelile, unikezele isikhathi ebhizinisini, ukuphumula - noma yini, ngokuqondene nawe kuphela.
Isifundo 4. Ukuxhuma
I-Yogis yanoma yiliphi izinga liyazi ukuthi ukudlula ekutadisheni kokugcina ngaphambilini (Shavasana) kuyiphutha elikhulu. Lokhu kunganqanda imizamo yakho yokuthuthukisa nokuzithuthukisa. Izifundo ziqinisekisa isidingo sokuphumula emva "kosuku olunzima". Futhi nakuba abanye abamabhizinisi abaphumelelayo beqhayisa ngokukwazi ukulala amahora angu-4 kuphela ebusuku (okuyingxenye eyodwa kuphela yesimiso somuntu omdala), isayensi ithi ukungabi nesikhathi sokulala kunciphisa ukusebenza komsebenzi futhi kunciphisa amathuba okukhula. Ubuciko nemisebenzi yokuqonda ingase ihlupheke ngokuqondile ngenxa yokuntuleka kokuphumula.
Okubalulekile: i-Shavasana egcwele ngaphandle kwe-yota - okungenani amahora angu-7-8 okulala, okungabazeki ukuthi ayokwenza usuku lwakho olulandelayo lukhiqize futhi lugcwele kakhulu, nezixazululo - enembile kakhulu.
Isifundo 5. Thola Ukuvumelana
Njengoba i-Dalai Lama ithe, isihluthulelo sempilo enhle ukuthula emphefumulweni wakho. Abasebenzi be-yoga basikhumbuza ukuthi impilo yangempela nempumelelo iyimikhiqizo yemizamo ehlangene yomzimba nomoya. Imizimba yethu ithatha ukucindezeleka, futhi lokhu kuholela emiphumeleni emibi yezempilo, ngokwesibonelo, ingozi eyengeziwe yokwelashwa kwegazi nesifo sezinto eziphilayo. Ngakolunye uhlangothi, isimo senjabulo siholela ekuthuthukiseni ifomu lomzimba: liqinisa isimiso somzimba sokuzivikela, sithuthukise ubuthongo futhi sikhuthaze isikhathi eside. Ngesikhathi esifanayo, uma unendaba ngomzimba, ulwazi lusebenza ngendlela efanele - uchitha umzamo omncane nesikhathi emsebenzini futhi ufeze umkhiqizo ophezulu nokusebenza kahle.
Okubalulekile: ukulinganisa izidingo zomzimba kanye nekhono lomoya akulona nzima njengoba kubonakala ekuqaleni. Ukwandisa ukumelana nokucindezeleka, khetha "indlela yokuhlanganisa" izindlela ezilula kuwe. Futhi ugcine imithetho yokunakekela impilo yakho.
Isifundo 6. Finyelela okungenakwenzeka
Umgomo oyinhloko we-yoga ukuhlanganiswa kwakho nomuntu wangaphakathi ngokuvumelanisa umoya nomzimba. Futhi empilweni - ukuphumelela komsebenzi ophumelelayo, ohambisana namanani akho angaphakathi. Kungakhathaliseki ukuthi ukugcwaliseka kwe-"Raven pose" noma ukukhuthazwa, amandla okugqoka nokuzicabangela komuntu siqu, ngokugcwaliseka komgomo weqiniso, kungaba ngokusho kukaJoseph Campbell, uF.D. ngefilosofi, isazi sezinganekwane, "vula umnyango lapho kukhona izindonga kuphela." "Amandla Enkolelo" ivumela ukuthi, ngokuhambisana nemigomo yethu yangaphakathi, ukubeletha inqwaba yamathuba angavamile.
Kubalulekile: ukuzilalela nokuthola ukuthi yini oyifunayo ngempela kule mpilo evela kuwe nakwabanye - lokhu, ngokungahambisani kahle, kakade uyingxenye ekufinyeleleni umgomo ongase usazi ngawo.
Ukuhlelwa kombhede kaFeng Shui
Ingabe udinga ukukholelwa ezimangalisweni?
Ikhadi lesifiso se-Feng Shui
Ukwelashwa komkhuhlane ekhaya
Ungakhipha kanjani umnandi?
Isihlalo sezimoto somntwana
Yeka ukuthi ungafungi ngothandekayo?
Indlela yokudla kahle uma wenza imfanelo
Yini ongayethula ngo-Mashi 8 - uthisha, umfundisi, intombazane, intombi, umfazi, intombazane - izibonelo nemibono - Izipho zangempela zomama ngo-Mashi 8 - kusukela endodaneni nendodakazi
Ukuhlaselwa ekhaya ubuso nomzimba
Ilayisi nenkukhu enhlobonhlobo: kulula futhi enhle kakhulu
Konke okuzungezile iziphambano: iphi iholide egujwa ngoSeptemba 27?
Umndeni Iglesias Russified
I-heart palpitations kwabesifazane abakhulelwe
Indlela yokususa ngokushesha ukukhathala ngokomzimba